ဘယ်သူတွေအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နိုင်သလဲ? Membership is open to representatives from non-profit,
non-partisan NGOs, civil society organizations,INGOs,
networks and Technical Resource Persons.
ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်လိုသည့်အဖွဲ့အစည်းများသည်အောက်ပါ အချက်အလက်များနှင့်ပြည့်စုံရန်လိုအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင်ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးလုပ်ငန်းများသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေး များအတွက်လှုပ်ရှားနေသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရမည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင်ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုမြှင့်တင်ရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားမှုရှိရမည်။
GEN ၏ မဟာဗျူဟာနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖွဲ့စည်းပုံကသိရှိနားလည်ထားရမည်။
GEN ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာပါက GEN နှင့်မည်ကဲ့သို့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မည်ကိုတင်ပြရမည်။
GEN ၏ လှုပ်ရှားမများတွင်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေပးရမည်။
GEN နှင့်အဓိကဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲ၏ နာမည်၊ဆက်သွယ်ရမည့် အချက်အလက်များကိုပေးရမည်။(အကယ်၍အဆင်ပြေပါက ဆက်သွယ်ရမည့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ အချက်အလက်များကိုလည်းပေးရမည်)
GEN တွင်တက်ကြွစွာပါဝင်နေသော အဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံးတစ်ဦး(သို့မဟုတ်တစ်ဖွဲ့မှ) ထောက်ခံပေးရမည်။
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေး ကွန်ရက်၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်လိုသည့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများသည်အော အောက်ပါအချက်အလက်များနှင့်ပြည့်စုံရန်လိုအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင်ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေး လုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေး များအတွက်လှုပ်ရှားနေသူဖြစ်ရမည်။
GEN ၏ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၊ လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သော အတွေ့အကြုံများနှင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ရှိရမည်။
GEN ၏ လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ(အနည်းဆုံး) နှစ်ဦးမှထောက်ခံချက်ပေးရမည်။
လိုအပ်ပါက GEN ၏ လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
GEN အဖွဲ့ဝင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်များ
တစ်နှစ်တစ်ခါ ကျင်းပမည့်နှစ်ပတ်လည်အစည်အဝေးတွင်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး တက်ရောက်ပါဝင်ပေးရမည်။ (မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပတွင်နေထိုင်သော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများမှအပ)
တစ်နှစ်လျှင်လစဉ်အစည်းအဝေး အနည်းဆုံး (၆)ကြိမ်ပါဝင်တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ (၆)ကြိမ်တွင် (၄)ကြိမ်သည်လူတိုယ်တိုင်အနေဖြင့်မဖြစ်မနေ တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်(၂)ကြိမ်အား လူကိုယ်တိုင် မတက်ရောက်နိုင်ပါက အီးမေးလ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း အကြောင်းကြားရမည်။ (မြန်မာနိုင်ငံ ပြင်ပတွင်နေထိုင်သော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများမှအပ)
ရန်ကုန်ပြင်ပတွင်အခြေစိုက်သော အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်လစဉ်အစည်းအEဝးများကိုမတက်ရောက်နိုင်သော်လည်း အီးမေးလ်(သို့မဟုတ်) ဖုန်းဖြင့်ဆကသွယ်အကြောင်းပြန်ပါက် အစည်းအဝေး တက်ရောက်သကဲ့သို့မှတ်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်။
GEN CU မှပေးပို့သော အီးမေးလ်များ၊ ဖိတ်ကြားလွှာများအား လက်ခံရရှိကြောင်း ပုံမှန်အကြောင်းပြန်ရမည်။
အနည်းဆုံး လုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုတွင်တက်ကြွစွာ ပါဝင်ပေးရမည်။
လုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့်GEN CU မှအကူအညီတောင်းခံပါက အကြံပြုချက်များနှင့်တုံ့ပြန်မှုများကိုပုံမှန်ပံ့ပိုး ကူညီပေးသွားရမည်။
(၂)နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အသစ်ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည်။ GEN CU မှလည်း ထိုသို့အဖွဲ့ဝင်အသစ်အဖြစ် ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်ရန်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါမည်။ သို့မှသာ GEN ၏ အဖွဲ့ဝင်များစာရင်းတွင် မည်သည့်အဖွဲဝင်များသည်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဆက်လက်ပါဝင်လိုသည်ဟုGEN CU အနေဖြင့် မှတ်သားထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုသက်တမ်းသည်အလိုအလျောက်ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသစ်ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းသည်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လျှောက်ထားခြင်း၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူတူပင် ဖြစ်ပါသည်။
လစဉ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ၊ လစဉ်သတင်းလွှာများ၊ အစီရင်ခံစာအကြမ်းများနှင့်အခြားသတင်း အချက်အလက်များသည်GEN အဖွဲ့ဝင်များကိုသာ ဖြန့်ဝေရန်ကန့်သတ်ထားသောကြောင့်အခြားသို့မျှဝေလိုပါက GEN ၏ ခွင့်ပြုချက်ကိုအရင်ရယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကိုGEN ၏ အဖွဲ့ဝင်များ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အခြားသူများအကြား ဖြန်Eဝခြင်း (သို့) ကန့်သတ်ခြင်းများအား ပြုလုပ်နိုင်ခွင့်သည်GEN CU ၏ အခွင့်အရေးသာဖြစ်သည်။
GEN ၏ နာမည်ကိုအသုံးပြု၍ အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်း၊ မတော်မလျော်အသုံးချခြင်း (သို့မဟုတ်) ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ထုတ်ခြင်းများအား အသေအချာ တားမြစ်အပ်ပါသည်။
အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်အဖွဲ့အစည်းထံဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အီးမေးလ်များကိုပေးသည့်အခါ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အီးမေးလ်များ မဟုတ်ဘဲ အဖွဲ့အစည်းမှပေးထားသော အီးမေးလ်ဖြစ်ရမည်။
အကယ်၍ အဓိက ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ ပြောင်းလဲသွားပါက GEN CU သို့ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပေးရမည်။
GEN CU မှအဖွဲ့ဝင်များထံအခါအားလျော်စွာ လာရောက်တွေ့ဆုံမှုများအား လက်ခံရမည်။
မိမိအဖွဲ့အစည်း၏ ကျား၊ မ ရေးရာနှင့်ဆက်စပ်သော အစီအစဉ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုလစဉ်အစည်းအဝေးများ (သို့) အီးမေးလ်များမှတဆင့်မျှဝေပးရမည်။
အကယ်၍ GEN အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှရပ်နားလိုပါက GEN-CU သို့အဖွဲ့အစည်း၏ တရားဝင်စာ (သို့) အီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များမှလည်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှရပ်နားလိုပါက တရားဝင်စာပေးပို့ကာ ရပ်နားနိုင်ပါသည်။
ပါဝင်မှုနည်းပါသော အဖွဲ့ဝင်များအား GEN CU မှဆက်သွယ်၍ လိုအပ်သော အထောက်အပံ့များကို ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ပြီး (၆)လအတွင်း ဆက်သွယ်မှုမရရှိပါက ယင်းအဖွဲဝင်များသည်GEN အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှရပ်နားလိုသည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ အချက်များအပြင်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများသည်လိုအပ်ပါက ပညာရပဆိုင်ရာ် အကူအညီများ ပံ့ပိုးပေးရမည်။GEN ၏ ကွဲပြားခြားနားသော လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်များတွင်ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ပဲ့ကိုင်ကော်မတီ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ပြင်ပမှစီစဉ်ကျင်းပအပ်ပါသော အစီအစဉ်များတွင်GEN အနေဖြင့် တက်ရောက်ပေးရမည်။သင့်လျော်သည့်နေရာများတွင်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပေးရန်။
လစဉ်အစည်းအဝေးများသို့တစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံး (၆)ကြိမ်တက်ရောက်ရန်။ (အသေးစိတ်အား အဖွဲ့ဝင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်များတွင်ဖော်ပြပြီး ဖြစ်ပါသည်။)
အနည်းဆုံး လုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုတွင်တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်။
လုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့်GEN CU မှအကူအညီတောင်းခံသော လုပ်ငန်းများကိုအကြံပြုချက်များနှင့်တုံ့ပြန်မှုများဖြင့်ပုံမှန် ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားရန်။
GEN CU မှပေးပို့သော ဖိတ်ကြားလွှာများအား လက်ခံရရှိကြောင်း အီးမေးလ်ပုံမှန်ပြန်ပို့ပေးရန်။
မိမိအဖွဲ့အစည်း၏ ကျား၊ မ ရေးရာများနှင့်ဆက်စပ်သော အစီအစဉ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုလစဉ်အစည်းအဝေးများ (သို့) အီးမေးလ်များမှတဆင့်မျှဝေပေးရန်။
တက်ကြွသော အဖွဲ့ဝင် - နှစ်ပတလည်ညီလာခံအပါအဝင်မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်(၆)ခုမှအနည်းဆုံး (၄)ခုပြည့်မီသော အဖွဲ့ဝင်များအား တက်ကြွသောအဆင့်အဖွဲဝင်များအဖြစ်သတ်မှတ်ပါမည်။
အထောက်အကူပြုသော အဖွဲ့ဝင် - နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံအပါအဝင်မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်(၆)ခုမှ အနည်းဆုံး (၃)ခုပြည့်မီသော အဖွဲ့ဝင်များအား အထောက်အကူပြုသောအဆင့်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်သတ်မှတ်ပါမည်။
စိတ်ပါဝင်စားသော အဖွဲ့ဝင် - နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံအပါအဝင်မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်(၆)ခုမှ အနည်းဆုံး (၂)ခုပြည့်မီသော အဖွဲ့ဝင်များအား စိတ်ပါဝင်စားသောအဆင့်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်သတ်မှတ်ပါမည်။